Ny asa miafina tsy manara-dalàna, antony voalohan’ny fitomboan’ny hosoka amin’ny latsakemboka sôsialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2020 16:07 GMT
Misintona lakolosy fanairana ny Fitsarana misahana ny fanamarinambola. Taorian'ny niampangàny tsy tapaka ny fandrika ataon'ireo mahazo fiahiana ara-tsôsialy, naverin'ilay sampandraharaha ho amin'ny toerany ny zavatra rehetra, narahan'ny fandalinany isantaona momba ny Fiahiana sôsialy, nivoaka tamin'ny Alarobia 17 Septambra.
Iza no manao hosoka ao Frantsa ? Ireo ao anatin'ny sehatry ny fanorenana sy ny varotra no tena manao azy, tombanana ho 22% sy 12%, arahan'ny sehatry ny fitaterana. Ny mifamadika amin'izay, ireo tahan'ny hosoka any amin'ny indostria sy ny fitantanambola no mety ho ambany indrindra. Ny firoboroboan'ny asa miafina tsy manara-dalàna ao Frantsa dia afaka hazavaina amin'ny alàlan'ny fitomboan'ireo vesatra sy hetra : nampitomboina ny fahasarotan'ny fikarakaràna antontan-taratasim-pitantanana ao Frantsa, ary dia nanosika ny fisian'ny asa afinafenina.
Antony hafa mifanakaiky amin'io, ny fitomboan'ireo mpiasa nafindra toerana. Avy any Pôlônina, Romania; ny fepetra sôsialy nisy tany amin'ny firenena niaviany no itantànana azy ireny – faran'izay mora tokoa – nefa izy ireo ao Frantsa no miasa ary tsy manana asa sahanina akory any amin'ireny firenena ireny ireo mpampiasa azy ireny.